China N-Formyl Morpholine (NFM) mpanamboatra sy mpamatsy | tso-po
Vokatra: N - FORMYL MORPHOLINE
CAS No. .: 4394-85-8
Milanja molekular: 115.13
N-formylmorpholine (NFM) dia solika organika manan-danja sy akora simika tsara. Rano tsy misy loko sy mangarahara izy amin'ny hafanan'ny trano. Izy io dia manana ny toetra simika an'ny amide. Ny vahaolana aqueous azy dia mora hydrolyzed ho morpholine sy asidra formic amin'ny fisian'ny asidra na alkali, ary ny solution aqueous dia alkaline malemy.
Ny N-formylmorpholine dia solvent fanerena tsara ho an'ny fanomanana aromatika, ary be mpampiasa amin'ny kofehy vita amin'ny sentetika sy ny saha hafa izy io.
Izy io dia ampiasaina amin'ny famoahana ny entona voajanahary, gazy synthesis, gazy flue, menaka condensate etona voajanahary ary lasantsy; izy io dia ny solvent solisiona an'ny fitaovana aromatika solika, izay azo ampiasaina hamerenana ireo aromatika amin'ny alàlan'ny fanadiovana fitrandrahana. Izy io dia manana selectivity tsara, fahamarinan-toerana maharitra ary fitoniana simika Tsara, tsy misy poizina, tsy manimba. Izy io dia solvent be mpampiasa amin'ny famerenana ireo hidrokarôma manitra. Izy io dia solvent aprotic tena tsara misy solubility avo sy selectivity ho an'ny aromatika. Ny fifangaroana azy dia nampiasaina tamim-pahombiazana tamin'ny fizotran'ny fitrandrahana aromatika sy ny fizotry ny fifangaroana butena.
Tantara lava sy famokarana maharitra
Ny fahaiza-manao famokarana ampy, azonay atao ny mandamina ny fandefasana aminao ara-potoana.
1. Rafitra fanaraha-maso kalitao henjana
Manana mari-pahaizana ISO izahay, manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra izahay, matihanina avokoa ny teknisianinay, mifehy tanteraka ny kalitao izy ireo.
Alohan'ny baiko dia afaka mandefa ny santionany amin'ny fitsapana anao izahay. Izahay dia manome toky fa ny kalitao dia mitovy amin'ny habetsahan'ny habetsany. SGS na antoko fahatelo hafa dia ekena.
2. Fanaterana haingana
Manana fiaraha-miasa tsara amin'ireo mpandefa matihanina maro eto izahay; afaka mandefa ny vokatra aminao izahay raha vao manamafy ny baiko ianao.
3. Fe-potoana fandoavam-bola tsara kokoa
Azontsika atao ny mamolavola fomba fandoavam-bola mifanaraka amin'ny toetran'ny mpanjifa. Azo omena ny fe-potoana fandoavam-bola bebe kokoa
• Manaova zavatra simika amin'ny vanim-potoana iainana. Manana traikefa mihoatra ny 19 taona amin'ny Indostria Simika sy ny varotra izahay.
• Ekipa matihanina sy teknika hiantohana ny kalitaony. Ny olan'ny kalitaon'ny vokatra rehetra dia azo ovaina na averina.
• Fahalalana simia lalina sy traikefa hanomezana serivisy fitambarana avo lenta.
• Fanaraha-maso ny kalitao henjana. Alohan'ny fandefasana dia afaka manolotra santionany maimaimpoana ho an'ny fitsapana izahay.
• akora fototra tena novokarin-tena, Ka manana tombony azo amin'ny fifaninanana ny vidiny.
• Fandefasana haingana amin'ny alàlan'ny fandefasana laza, fonosana amin'ny paleta ho fangatahana manokana an'ny mpividy. Sarin'ny karatra omena alohan'ny sy aorian'ny fametrahana ao anaty kaontenera ho an'ny mpanjifa.
• Fametrahana matihanina. Manana ekipa iray manara-maso ny fampidirana ireo fitaovana izahay. Hizaha ny kaontenera, ny fonosana alohan'ny hametrahana.
• Ary hanao tatitra feno ho an'ny mpanjifanay amin'ny entana tsirairay.
• Serivisy tsara indrindra aorian'ny fandefasana amin'ny mailaka sy antso.
Previous: Dichlorophosphate Phenyl